China Kọmpat Wheat ntụ ọka Mill rụpụta na ụlọ ọrụ | Obodo Chinatown
Ọka ọka ọka
Wheat ntụ ọka Mill
Ntụ ọka agwakọta agwakọta
Akụrụngwa igwe eji egwe ọka
Ngwongwo nhicha ọka
Ngwongwo ihe nhicha nkpuru
Ngwongwo na-ebu akụrụngwa
Ọchịchọ na Pneumatic Conveying Equipment
TQSF Series Nnukwu Ike Mbibi
TCRS Series Rotary Nkewa
Ọdụdọ ala Mill
Kọmpat Wheat ntụ ọka Mill
A haziri ngwa igwe ihe ntụ ọka nke kọmpụta ọka igwe ọka ntụ ọka maka osisi niile wee wụnye ya na nkwado ngwongwo ígwè. Ejiri usoro atọ rụọ ọrụ nkwado bụ isi: igwe igwe na-anọ n'elu ala, a na-arụnye sifters na ala nke mbụ, cyclones na ọkpọkọ pneumatic nọ n'ala nke abụọ.
Ihe ndị ahụ sitere na igwe igwe na-ebuli elu site na sistemụ ntụgharị ikuku. A na-eji ọkpọkọ emechiri emechi maka ikuku na de-dusting. Onodi elu dị obere iji belata ego ndị ahịa. Mkpụrụ igwe na-egwe ọka nwere ike ịgbanwe iji mejuo ndị ahịa 'ihe dị iche iche a chọrọ. Nhọrọ PLC akara usoro nwere ike na-aghọta Central akara na elu ogo akpaaka na-eme ka ọrụ mfe na mgbanwe. Mkpọchi ikuku nwere ike izere nkwụsị ájá iji debe ọnọdụ ịdị ọcha dị elu. Enwere ike idozi igwe ihe niile na ụlọ nkwakọba ihe ma nwee ike ịhazi ya dị ka ihe dị iche iche chọrọ.
Na ihicha ngalaba, anyị ịmụta ihicha ụdị ihicha technology.it ejikari na-agụnye 2 ugboro sifting, 2 ugboro scouring, 2times de-stoning, otu oge ọcha, 4 ugboro ọchịchọ, 1 ka 2 ugboro dampening, 3 ugboro magnetik nkewa na na. Na ngalaba nhicha, enwere ọtụtụ usoro ochicho nke nwere ike belata nchapu igwe site na igwe ma nwee ezigbo ebe ọrụ. Nke a bụ ihe mgbagwoju anya nke nwere ike wepu ọtụtụ ihe na-adịghị mma, nha etiti na ezigbo ụgwọ Nhicha ngalaba adịghị mma maka ọka wit na-ebubata na mmiri dị ala yana ọka wit ruru unyi sitere na ndị ahịa mpaghara.
N'ebe a na-egwe ọka, e nwere ụdị usoro anọ iji ghee ọka wit na ntụ ọka. Ha bụ usoro 4-nkwụsịtụ, sistemụ Mbelata 7, sistemụ 1-Semolina na sistemụ Tail 1. na Mbelata nke na-eme ka ntụ ọka dị mma site na oke oke. rollers for Reduction, Semolina, na Tail sistemụ bụ ezigbo rollers nke a na-agbawa agbawa agbawa.Ọdịdị dum ga-eme ka obere bran gwakọtara na bran na ntụ ọka ahụ na-abawanye oke. nke ọma e pneumatic eweli usoro, dum na nkume igwe nri ihe na-agafere site High mgbali fan.The milling ụlọ ga-ọcha na ịdị ọcha maka ọchịchọ nkuchi.
All mbukota igwe na-automatioc.The mbukota igwe nwere atụmatụ nke elu ọtụtụ ziri ezi, ngwa ngwa mbukota ọsọ, a pụrụ ịdabere na na ike working.It nwere ike itu ma gụọ na-akpaghị aka, na ọ nwere ike imubanye weight.The mbukota igwe nwere ọrụ nke kpatara onwe-nchoputa. Ọ bụ igwe akwa akwa nwere ọrụ ịkwa akwa na ịkpụ. Igwe akụrụngwa nwere ụdị akpa akpa mkpọchi, whih nwere ike igbochi ihe si ịpụ apụ. Nkọwapụta ntinye gụnyere 1-5kg, 2.5-10kg, 20-25kg, 30-50kg. The ahịa nwere ike họrọ dị iche iche mbukota nkọwapụta dị ka chọrọ.
N'akụkụ a, anyị ga-enye kọmpụta na-achịkwa ọkụ eletrik, eriri mgbaama, eriri USB na ọkwa USB, yana akụkụ eletriki ndị ọzọ. A naghị esonye ndị na-esote ya na eriri ike eletrik belụsọ ndị ahịa achọrọ maka ha. Usoro njikwa PLC bụ nhọrọ nhọrọ maka ndị ahịa. Na usoro njikwa PLC, ihe eji arụ ọrụ nke na-arụ ọrụ niile nwere ike ime ka igwe na-arụ ọrụ nke ọma ma na-aga nke ọma. Usoro ahụ ga-eme ụfọdụ mkpebi ma mee mmeghachi omume mgbe igwe ọ bụla nwere mmejọ ma ọ bụ kwụsị na-adịghị mma. N'otu oge ahụ ọ ga-eme Mkpu ma chetara onye ọrụ ahụ ka ọ dozie mmejọ ahụ.Schneider a na-eji akụkụ eletrik arụ ọrụ na kọmpụta eletriki PLC ga-abụ Siemens, Omron, Mitsubishi na mba ndị ọzọ. na-agba nke ọma.
Ndepụta Nkọwa na ụzụ
Kwadoro Ike (t / 24h) Ala Mill Moded Nlereanya dị ntakịrị Oghere LxWxH (m)
CTWM-40 40 Akwụkwọ ntuziaka Ejima Nkeji 30X8X11
CTWM-60 60 Akwụkwọ ntuziaka Ejima Nkeji 35X8X11
CTWM-80 80 Pneumatic Mee Atụmatụ 38X10X11
CTWM-100 100 Pneumatic Mee Atụmatụ 42X10X11
CTWM-120 120 Pneumatic Mee Atụmatụ 46X10X11
CTWM-150 150 Pneumatic Mee Atụmatụ 50X10X11
Nke gara aga: Ejima ịghasa Volumetric feeder
Osote: Igbe ndọta
Ntụ ọka Mpepu Abụọ Way Valve
Akwụkwọ ntuziaka na Pneumatic Slide Gate
Air-imegharị ihe Aspirator
Gburugburu Link Chain Conveyor
Adreesị: Poliu Quliang Industrial District Xinmi City
Ekwentị: +86 13633846327
Ntụ ọka na-ebugharị ntụ ọka na-ebu ebu Na ntụ ọka ...
Ntụ ọka Mill Plant Plansifter Machine / Plansifter N'ihi Rice ...
FSFG usoro planningifter n'ọtụtụ ebe etinyere na nke oge a ntụ ọka na nkume igwe nri osisi na ri ...
Usoro iwepu okwute n’ime igwe nri
Na igwe ọka, usoro ịwepụ nkume na ọka wit bụ ...
The nri ụlọ ọrụ bụ ogidi ụlọ ọrụ nke China si mba aku na uba, a ...